Football Khabar » सात खेलपछि पहिलो जित : घरेलु मैदानमा आर्सनलद्वारा चेल्सीको धुलाइ !
सात खेलपछि पहिलो जित : घरेलु मैदानमा आर्सनलद्वारा चेल्सीको धुलाइ !
यो सिजन खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको आर्सनलले इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीमाथि उत्कृष्ट जित निकालेको छ । गत राति आफ्नो घरेलु मैदानमा भएको खेलमा आर्सनलले पाहुना टोली चेल्सीमाथि ३–१ जित निकाल्दै लिगमा ७ खेलपछि जितको स्वाद चाखेको हो । आर्सनलले लिगमा दुई महिनापछि पहिलो जित निकाल्न सफल भयो ।
आर्सनलका लागि खेलको ३४औं मिनेटमा एलेक्सान्ड्रे लाकाजेटले पेनाल्टीमार्फत् पहिलो गोल गरेर अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि खेलको ४४औं मिनेटमा ग्रानिट शाकाले गोल गरेर पहिलो हाफमा आर्सनललाई २–० को सहज अग्रता दिलाए ।
दोस्रो हाफमा पनि आर्सनलले गोल निकाल्न सफल भयो । खेलको ५६औं मिनेटमा बुकायो शाकाले गोल गरेपछि आर्सनल ३–० को अग्रता बनाएर सहज जिततर्फ अघि बढेको थियो । महत्त्वपूर्ण खेलमा ३ गोलले पछि परेको चेल्सी खेलमा फर्किन ठूलै संघर्ष गरिरहेको थियो । सोक्रममा ८५औं मिनेटमा टमी अब्राहमले गोल गरेर खेल ३–१ मा छोट्याए ।
त्यसपछि चेल्सीले खेलमा कमब्याक गर्ने झिनो आशा बनाएको थियो । ९० मिनेटपछि इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा चेल्सीले पेनाल्टी पायो । तर, जर्जिन्होको पेनाल्टी प्रहार आर्सनलका गोलकिपरले रोकेपछि चेल्सीको खेलमा फर्किने सम्भावना समाप्त भयो । र, खेल आर्सनलले ३–१ ले जित्यो ।
अब यो जितपछि आर्सनले १५ खेलबाट १७ अंक जोडेर लिगको १४औं स्थानमा चढेको छ । आर्सनलले यसअघिका ७ खेलमा कुनै खेल जित्न सकेको थिएन । यो जितले आर्सनललाई ठूलो राहत मिलेको छ । यता, पराजित चेल्सी १५ खेलपछि २५ अंकका साथ अब सातौं स्थानमा झरेको छ ।
प्रकाशित मिति १२ पुष २०७७, आईतवार ०७:२१